September 2019 - D Khit Media
ထိုင်းတောင်ပိုင်း ချွန်းဖွန်းခရိုင်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို မလေးရှားသို့ပို့ဆောင်နေတဲ့ လူကုန်ကူးဂိုဏ်း ခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းဆီးရမိပြီလို့ ထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်မှု နှိမ်နင်းရေးနဲ့ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့က စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သြဂုတ်လလယ်က ရနောင်းဘက်ကနေ လှေနဲ့ကူးလာပြီး ချွန်းဖွန်းခရိုင် ဖတိုမြို့နယ် ပတ်ဆုန်းအုပ်စုထဲမှာ မလေးရှားဘက်ဆက်သွားဖို့ လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၇ ဦးကို တာဝန်ရှိသူတွေက ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ လူ ၃ ဦးကိုလည်း လူကုန်ကူးမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး […]
” ကလေးကငယ်တော့ ကိုယ်သာတစ်ခုခု ဖြစ်သွားခဲ့ရင် သူတိုအတွက် အမေဆုံးရှုံးသွားမှာ အမေမရှိတဲ့ဘဝကို ဖြတ်သန်းရမှာ ပဲဆိုတဲ့အတွေးက ဝင်လာတယ်…. သက်မွန်မြင့် ” The_Radar
” ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားပြီး ယောက်ျားယူစေချင်တယ် အရွယ်လေးရှိတုန်း…. ရန်အောင် ” The_Radar